May Nyane: မဲပေးရမှာ ဒီလိုပါ...
ဒီမိုတွေကတော့ တကယ်ကို ငတုံးတွေပဲ . . . နအဖ ဘယ်ကစားကွက်ကို ကစားနေလဲ မသိပဲ … မစဉ်းစားပဲ စိတ်ထဲရှိတာတွေလုပ်နေတယ် … ပွဲပြီးတော့ ကြည့်သေးတာပေါ့ =P
ပိတောက်မြေ ဘလောက်ကိုလဲ လာခဲ့ပါဦး။ ဒီမိုဘလော့တွေလို အရေမရ အဖတ်မရတွေပဲ ရေးပြောနေတာ မဟုတ်ပဲ . . တကယ်ကို ဗဟုသုတနဲ့ တွေးခေါ်စရာတွေကို ရေးကျပါတယ်။ ထူးခြားဆုံးကတော့ ဒီမိုဘလော့တွေလို တဖက်သတ် ဒီမိုစံနစ်ကို မျက်ကန်းကောင်းတယ်လို့ ကုံန်းအော်နေတာ မဟုတ်ပဲ . .. ဆန့်ကျင်ဖက် အမြင်တွေကို လုံးဝ လက်ခံပါတယ်။ ဘယ်သူမှလဲ comment ကို မျက်ကန်း မြှောက်ပြီး ရေးတာ မရှိကျပါ။
ဒီမိုသမားတွေ .. ဂျပန်ရဲက ပစ်စလခတ်ရိုက်လို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်ကြားတယ် . . . စွမ်းအားရှင်တွေ ကားပေါ်ဆွဲတင်တုံးကတော့ ဟောင်လိုက်.. အော်လိုက်ကျတာ .. တလောကလုံး ပွက်ပွက်ဆူသွားတယ်.. အခုဂျပန်ရဲတွေက ရိုက်တာကျတော့ တချက်လေးတောင် မဝေဖန်ရဲရှာဘူး… ဟားဟား .. နောက်ဆုံးတော့ ဒီမိုဆိုတာ နအဖကို ဝေဖန်ဖို့ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နေရာမှ အလကားပါ . . =P အားတော့နာတယ် .. ဒီမိုဆိုရင် တစက်လေးမှကို အထင်မကြီးဘူးဗျ ..
To in search of lying
အရေမရ အဖတ်မရဘလော့ကို ကြိုက်လွန်းလို့ အမြဲတမ်းလာလာလည်နေတာပေါ့။ လာလည်ရင်လည်း ကောင်းကောင်းလာပြီး ကောင်းကောင်းမပြန်ပဲ စာကောင်းပေကောင်းဖတ်တဲ့သူတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးပေးနေတော့ မင်းအဆင့်အတန်းနဲ့ မင်းဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ မင်းဘာပဲပြောပြော အပိုပါပဲ။